प्रदेश नं. १ मा उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १६ मंसिर २०७६, सोमबार १३:०८
विराटनगर, १६ मंसिर । प्रदेश नं. १ का तीन वटा स्थानीय तहको प्रमुख सहित ७ वटा वडामा भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । गत शनिबार प्रदेश नं. १ का मोरंग, सुनसरी, पाँचथर, संखुवासभा, खोटाङ र भोजपुरका भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख सहित २ वटा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको प्रमुख सहित ५ वटा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ । सुनसरीको धरानका उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका तिलक राई निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रकाश राईलाई २ हजार ७९५ मतान्तरले पराजित गर्नुभयो ।
तिलकले २६ हजार ७०९ मत पाउनुभयो । प्रकाशले भने २३ हजार ९१४ मत पाउनु भएको छ । धरानमा कांग्रेसको यो बहुदलपछि पहिलो जित हो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तारा सुब्बा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । उहााको निधन भएपछि रिक्त प्रमुख पदका लागि शनिबार त्यहाँ उपनिर्वाचन भएको थियो । धरानको वडा नं ७ को वडाध्यक्षमा नेकपामा जीवन सुवेदी निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले नेपाली काँग्रेसका सुबर्ण पालिखे १ मतले पराजित गर्नुभयो ।
सुवेदीले ६ सय २२ मत प्राप्त गर्नुभयो भने पालिखेले ६ सय २१ मत ल्याउनु भएको थियो । उता पाँचथरको फाल्गुनन्द गाँउपालिकाको अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वीरबहादुर कुरुम्बाङ विजयी हुनुभएको छ । गएराती २ बजे सकिएको मतगणनाअनुशार कुरुम्बाङले ५ हजार ३ सय ६९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका वृजहाङ आङदेम्बेले ४ हजार ५ सय ६३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । कुरुम्बाङले ८ सय ६ मतको अन्तरले विजय हाँसिल गर्नुभएको हो ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा नेकपाका तेजबहादुर पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको थियो । निकटतम् प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका विमन पराजुलीलाई हराउँदै आठ सय दुई मत अन्तरले पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको हो । पोखरेलले तीन हजार १८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने पराजुलीले दुई हजार दुई सय १६ मत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
मोरंगको धनपालथान गाउँपालिका २ मा नेपाली काँग्रेसका नारायणप्रसाद साह, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका १ मा नेकपाका गजाधर भट्टराई, हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नंं ७ मा नेपाली काँग्रेसका तिलविक्रम इधिङ्गो, भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका १ मा नेकपामा जितेन्द्र राई, खोटाङका शाकेला गाउँपालिका ३ मा नेकपाकी शिवकला राई निर्वाचित हुनु भएको छ ।
संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका ३ मा नेकपाका भरत घिमिरे निर्वाचित हुनु भएको थियो ।
सहारा नेपालद्धारा ५० लाख रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा
विराटनगर, २४ माघ । चेतना संरक्षण प्रतिष्ठान विराटनगरले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने आधा दर्जन व्यक्तिहरुलाई...